Saturday May 30, 2015 - 11:04:57 in Xiriirka Ciyaaraha Fudud by Nocsom Editor
Munaasabda maalinta ciyaaraha fudud ee caalamka oo ay soo qaban qaabiyeen xiriirka soomaaliyeed ee kiyaaraha fudud ayaa maanta ka dhacday garoonka Banaadir waxaan ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay Gos, wasaarada dhalinayarda iyo isboortiga iyo
Munaasabadan oo ahayd xuska maalinta xiriirka ciyaraha Fudud ee Caalamka ( Iaaf day) ayaa ahady sanadguuradii 20-aad ee la qabto, xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud oo sanad kasta ka qayb qaata ayaa sandkan si wayn ugu dabaal dagay munaasabada waxaana garoonka Banaadir lagu qabtay ciyaaro orodo oo ka qayb galeen wiilal iyo gabdho.
Gebagabadii waxaa halkaas ka hadlay xogahayha XSCF Maxamed Cabduulaahi Dhaaleey waxuuna sheegay in sanadkan uu xiriirka ciyaarah fudud sida caadada u ahayd uu diyaar garow fiican u soo galay xuska IAAFday , waxuuna sheegay in ay ka qayb galeen in kabadan 200 oo ciyaaryahan oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ku loolamayay orodada 100, 200, 400 iyo 800 mitir.
Guddoomiye ku xgeenka XSCF Marwo Khadiijo Aadan Daahir oo munaasadaba ka hadashay ayaa u mahad celisay dhamaan kooxaha iyo ciyaartoyda oo la’aantood ciyaaraha la qabteen sdia ay xustay waxayna sheegyay in xiriirka ciyaaraha fudud uu xuskan u yahay mid sand=adle ah oo ay ka qayb qaataan.
Ibraahin Xuseen Cali Roombe oo guddiga Fulinta Gos katirsan ayaa isna sheegay in ay gos soo dhawaynayso dadaalada xiriirka ciyaaraha fudud waxuuna hambalyo u diray ciyaartoyda ka qaybgashay tartanka gaar ahaan kuwa guulaystay.
Agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga Cabdulaahi Aaboow Xuseen oo goobta ka hadlay aya sheegay in wasaaradiisu soo dhawaynayso horumada ay sameeynayaan xiriirka ciyaaraha fudud waxuuna ku booriyay in ay halkooda kasii wadaan dadaalada.
Ugu dambayn waxaa halkaas lagu bixiyay abaalmarinadi kalmaha hore ee tartanka maalinta xuska xiriirka ciyaarah fudud e caalamka IAAF day 2015.